Ibhizinisi, Cela uchwepheshe
emakethe abahlanganyeli - umuntu ngokomzimba noma eqenjini elithile, okuyinto ngokukhethekile zavela kusuka abantu wabizela ndawonye usebenze wemboni ethile kwezomnotho. Kuleli zwe lanamuhla, ngokuvamile athathe isimo ezihlukahlukene izakhiwo yenhlangano (izinkampani, izinkampani, amafemu, njll). emakethe abahlanganyeli - ukuthi izinhlangano zomphakathi, kuncike ukuzimisela imithetho ngabo, esondela namazinga khona emkhakheni kwezomnotho, amabhizinisi nabantu ngabanye. sokusebenzelana (ukuthengwa nokudayiswa, ukuqasha, irenti), okuyinto akhiqizwa ngokuhambisana ngokuqinile isivumelwano esibhaliwe phakathi umthengi kanye nomdayisi, uvumele ukuze ujoyine sizinda ezahlukene ethile ubudlelwane kwezomnotho.
izifundo ezihlukahlukene ezikhona emakethe ticale ukuxhumana ngqo nomunye zifakwe wesifunda. Kuyinto ukunyakaza njalo imali kanye nezindleko, supply imali, tinsita kanye izimpahla emkhakheni kwezomnotho.
Umthengi ukufuneka eyenziwe emakhaya. Ziyakwazi njalo abadinga ezidayiswayo kanye nezinsizakalo umthengi. Cash isiphetho senziwa kuleli cala, nge ukuqhutshwa etholwe amabhizinisi nokunikeza zabasebenzi, inhloko-dolobha, umhlaba kanye nezinye izinto zokukhiqiza. Phezu kokuthola inhlangano zihlanganisa nabo umjikelezo wakho ukukhiqizwa futhi ukuthengisa izimpahla siphelile emakhaya.
Imikhiqizo, ekhaya Imishini, izingubo kanye ezihlukahlukene services ukuqedela ukunyakaza kwabo. Ngemva kwalokho, lo mjikelezo komnotho ukubuyiswa. Futhi lokhu ukunyakaza Kwenziwa njalo. Izinkomba yohwebo zezimali bese ugelezela kunqunywa isikhathi esithile. Ngokwesibonelo, ubude besikhathi ingaba njengoba ngonyaka. Inkulumo wenombolo etholakalayo ukudayiswa kwezimpahla kanye nemali elinganiselwa izimpahla zasendlini wokugodlwa. ukukhiqizwa Lonyaka kwezimpahla - ukugeleza.
izinkomba ezisemqoka kwezomnotho yezwe iyona umkhiqizo wonyaka wonke ohlangene. Limelela zibiza malini yezimpahla nezinkonzo ungakapheli nonyaka. Isakhiwo umkhiqizo kazwelonke kuhlanganisa kuphela lokho ifikile umjikelezo ogcwele ukukhiqiza futhi ilungele ukusetshenziswa. imikhiqizo Semi-siphelile futhi ahlukahlukene nalutho Lesisemkhatsini kulolu hlu akufakiwe.
Nokho, abahlanganyeli emakethe - akusiwona amabhizinisi nje kanye nasemakhaya. Ukuhlanganyela umjikelezo kwezomnotho iyona State kanye zezimali izikhungo (iningi labo abamelelwa amabhange). Laba abahlanganyela ezine ubudlelwano emakethe osemqoka. UMbuso lucwaningo ukuqoqwa izintela incurs ezithile izindleko. It othenga imikhiqizo silwenza kusuka yabo amaholo isabelomali.
Izikhonzi kwezimakethe - amabhange, ukusebenza njengoba yagxila okuyinto ukuhanjiswa lokungena nokuphuma kwemali. Ziyakwazi abamqoka ubudlelwane kwezomnotho nokusetshenziswa kwamathuluzi ezikhethekile. Ziyakwazi imali. Amathuluzi eziqhutshwa kubahlanganyeli kulesi sigaba emakethe, oluthathwa maturities ku:
- yesikhathi esifushane (nesikhathi izinyanga eziyishumi nambili);
- yesikhathi eside (ngaphezu konyaka isikhathi ukuzungeza);
iqembu Ngaphansi ebalulekile sizinda ezikhona abangabahlanganyeli izibambiso emakethe. Lezi ngokuvamile zihlanganisa issuers, zimali, izibambiso abaxhumanisi futhi kahulumeni, esikhiqiza kokulawulwa futhi kungekho mithetho elandelwayo. Izikhonzi izibambiso emakethe - izinhlangano noma abantu abangaphandle ukuthi imisebenzi ku ukuthengwa nokudayiswa le mibhalo noma afeze izibalo noma nesivinini iqhaza zabo.
Nenzuzo Gross futhi net yebhizinisi
Indlela yokuvula izingubo esitolo yezingane: Highlights
Eziguquguqukayo Economic nezindleko ngokuphelele
Amazwe asathuthuka ku emnothweni wezwe
Imvelo - kuyini? izimo ushintsho
Igama esitolo sezingubo - uqala kanjani?
Uyini umehluko kusukela ezincwadini zesayensi? izibonelo
Entsha Subaru Outback
Izimfihlo hearthstone: Paladin. Uhlolojikelele
Silungisa isaladi saseFrance nge-apula, inkukhu kanye anyanisi
Indlela ukondla izimvemvane: bedla endle futhi ekhaya?
Umuthi 'Cefixime'. imfundo
Ibambezelekile kwengqondo (retardation engqondo) - kuyini?
I-Jeep "Jaguar" - imoto esheshayo esheshayo yamabhizinisi azizethembayo nabaphumelelayo
Indlela ukupenda izinzipho zakho nge imibala emibili? izindlela ezilula
Ihhotela Arina Sand kuyona 4 * (eKrethe, Greece): ngezibuyekezo nezithombe